Ra'iisal wasaaraha Itoobiyo oo Baaq ka soo saaray awood qaybsiga Milatariga iyo Rayidka Suudaan - Waadinews | Somali News and Entertainments
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka dagay magaalada Khartuum ee xarunta u ah dalka Suudaan, waxaana la filayaa in uu dhexdhexaadin doono hoggaamiyeyaasha milatariga iyo hoggaamiyeyaasha dibad baxayaasha. Booqashadiisan ayaa imaanaysa iyadoo laamaha ammaanku ay toddobaadkan laayeen dad mudaaharaadayay oo dimuqraadiyad doon ahaa. Wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa sheegtay in ay 61 ruux ku dhinteen rabshadaha, balse dhakhaatiir lala xidhiidhiyay mucaaradka ayaa sheegay in toogasho lagu dilay in ka badan 100 ruux. Isbahaysiga Mucaaradka ayaa Jimcihii sheegay in ay aqbaleen dhexexaadinta ra’iisal wasaaraha Itoobiya balse ay shuruud ku xidheen.
Shuruudahaas waxaa ka mid ah 1- in golaha milatarigu uu qaato masuuliyadda dadkii Isniintii lagu dilay hawl-galkii kala eryidda dibad-baxayaasha, 2- in la bilaabo baadhitaan caalami ah oo arrintaas la xidhiidha. 3- iyo la sii daayo dhammaan dadka u xidhan arrimo siyaasadeed. Ra’iisal wasaare Abiy Axmed ayaa ku baaqay in si qaab dimuqraadi ah oo degdeg ah xukunka loo wareejiyo. “ciidanka, Shacabka iyo siyaasiyiinta Suudaan waxaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan tallaabooyin geesinimo leh oo loo qaado dhinaca dimuqraadiyadda sidoo kalena ay is afgarad ka gaadhaan arrinta muddada ku-meel-gaadhka ah” ayuu yidhi ra’iisal wasaare Axmed.
Ra’iisal wasaare Abiy Axmed ayaa awood-qaybsi ku baaqay kaddib markii uu kulamo la qaatay Milatariga iyo masuuliyiinta rayidka ee Suudaan. Ahmed ayaa soo jeediyo in la sameeyo gole ka kooba siddeed ruux oo rayid ah iyo 7 milatari ah, waxaanu sheegay in midnimadu ay shardi lagama maarmaan ah u tahay si nabadda loogu soo celiyo Suduudan
Related Topics:Abiy AxmedItoobiyaMilatariga SuudaannewsSuudaan